प्रधानमन्त्रीले संसद वि’घटन गरेर देशमा आगो लगाए-अशोक राई «
प्रधानमन्त्रीले संसद वि’घटन गरेर देशमा आगो लगाए-अशोक राई
प्रकाशित मिति : 28 December, 2020 1:08 am
काठमाण्डौ- जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद वि’घटन गरेर देशमा आगो लगाउने काम गरेको बताएका छन् । संसद वि’घटनको विरोधमा जसपाले आइतबार काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा आयोजना गरेको वि’रोधसभामा नेता राईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
आफ्नाे पार्टी र संसदीय दलभित्र बहुमत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतका अगाडि आफूलाई परीक्षण गर्न वा बहुमतसिद्ध प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्न संसद बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी उनले संसद नै भं’ग गरेर सारा देशमा आगो लगाउने काम गरेको नेता राईले बताए ।
संसदमा आफूले विश्वास गुमाइसकेको कुरा उठ्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाे सत्ताको कुर्सी जोगाउन अहंकार प्रस्तुत गर्दै संसद नै भं’ग गरिदिएको नेता राईले बताए ।
‘संसदमा सायद भ्रष्टाचारको कुरा उठ्थ्यो, सायद तपाईँले विश्वास गुमाउनुभएको कुरा उठ्थ्यो,’ नेता राईले भने, ‘एउटा लोकतान्त्रिक भावना भएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सामना गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, उहाँले आज संसद भं’ग गर्नुभएकोछ, असंवैधानिक काम गर्नुभएको छ, प्रतिगामी काम गर्नुभएको छ, जनद्रोही काम गर्नुभएको छ, सारा देशमा आगो लगाउने काम गर्नुभएको छ ।’
संसद बि’घटनको बि’रोधमा हजारौ कार्यकता सहित जसपाको प्रदर्शन : संसद भं’ग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमवि’रुद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आज आइतबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । सो प्रर्दशनमा जसपाका हजारौं कार्यकताले सहभागीता जनाएका थिए । जसपाले ओलीको कदम असं’वैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खा’रेज गर्न माग गरेको छ । रत्नपार्क शान्तिबाटिकाबाट जुलुस सुरु भएको छ । त्यो जु’लुस् पुतली सडक हुँदै पुनः शान्तिबाटिकामै पुगेर कोणसभामा परिणत परिणत भएको थियो ।
कार्यक्रमलाई पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु ड. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, अशोक राई , राजेन्द्र महतो लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । संसद भं’ग गर्ने ओलीको कदमविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको जसपाले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संसद वि’घटन गर्ने कुनै अधिकार केपी ओलीसँग नभएको पूर्व प्रधान मन्त्रि समेत रहेक डा. बाब ुराम भट्टराईले बताउनु भयो । अब सबै राजनीतिक पार्टी एक जुट भएर ओलीको असंवैधानिक कदम बि’रुद्ध उभिनुको बिकल्प नभएको पनि डा.भट्टराईले बताए ।
एकलौटी शासनबाट सत्ता टिकाउने खेल ओलीले खेलेकोले सबै राजनीतिक ढल एक ठाउँमा उभिएर यसको भ’ण्डाफोर गर्नुपर्ने पनि उहाँले अपिल गर्नु भयो । वरिष्ठ नेता अशोक राईले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीको कदम गलत र असं’वैधानिक भएको बताए । ओली प्रतिगमनकारी भएको भन्दै उहाको कदम बिहेमा बजाउने पञ्चैबाजा मलामीको गहना जस्तो भएको बताए ।